Notokanana ny televiziona katolika voalohany eto Madagasikara - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny 23 janoary tokony tamin’ny 4 ora tolakandro no tonga nitokana ny RTCM ny Kardinaly Désiré Tsarahazana, niaraka taminy tamin’izany ny Nonce Apostolique Monsenera Mgr Paolo Gualtieri ary koa ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina.
Nanapaka ny ruban tamin’izany fotoana izany ny Kardinaly.
Toa izao ny sombintsombiny amin’ny teny natolotr’ireo nandray fitenenana.
“Atao mampita ny marina ireto fitaovana ireto. Atao mampitombo ny fahalalana, miaro ny rariny ary mizara hafaliana. Atao mampiroborobo ao anatin’ny olona rehetra ny fiadanana nentin’i Kristy” hoy ny kardinaly Tsarahazana Désiré.
“Ny fitavan-tserasera misy amin’izao fotoana izao dia manamora amintsika hahazo ny momba ireo sedra sy fanamby tsy maintsy atrehana manerana an’izao tontolo izao. Ilaina amin’ny fampitana ny finoana, ny famolavolana ny mahaolona. Ao anatin’ny fiaraha-monina mihaohao sy feno ako dia mila fampitaovana mampita ny vaovao miahy ny mahaolona isika, fitaovana mampita soatoavina araka ny evanjely manome fanantenana ho an’ny olon-drehetra“ hoy ny Nonce Mgr Paolo Gualtieri.
Zava-dehibe ny fisian’ny fotodrafitrasa fampitam-baovao toa izao satria manampy amin’ny fitaizana na ara-panahy na amin'ny maha olom-pirenena hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izy nitsodrano ny RTCM ho ela velona.
RTCM na ny Radio Television Catholique Masova dia azo raisina ao amin'ny Frequence UHF 42 ao Toamasina.
Soritana fa ny Radio Masova dia efa 10 taona ankehitriny no nijoroany.
Araka izany dia ny diosezin'i Toamasina no nisantatra ny fananganana televiziona katolika voalohany eto Madagasikara. Miandry ny manaraka isika.
7ème édition du Challenge AIRTEL MANDRESY : : Les clés de la Renault Kwid sont entre les mains de FARA - il y a 1 moi